Global Voices teny Malagasy » Iray amin’ireo zavatra vitsivitsy azo antoka amin’ny krizy shiliàna ny aloky ny lasa · Global Voices teny Malagasy » Print
Iray amin'ireo zavatra vitsivitsy azo antoka amin'ny krizy shiliàna ny aloky ny lasa
Voadika ny 20 Novambra 2019 11:16 GMT 1	 · Mpanoratra Carlos Castillo Nandika (en) i Georgia Popplewell, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Ny Tetezana - The Bridge
Hetsipanoherana tao amin'ny kianja Plaza Baquedano ao Santiago, Shily Oktobra 2019. Sary an'i Carlos Figueroa tao amin'ny Wikimedia Commons  (CC BY-SA 4.0)
Ao anatin'ireo safotofoto izay iainan'i Shily  amin'izao fotoana izao miaraka aminà hetsipanoherana, fandoroana iniana atao ary fandrobàna, anjara lehibe tokoa no notànan'ireo tambajotra sôsialy tamin'ny fanomezana torohay isa-minitra momba ireo zava-mitranga tsy vitan'ireo mpilaza vaovao mahazatra ny mitatitra azy. Mazàna, anefa, dia hita fa sakana iray ho an'ny hetsika mankany amin'ny famahàna olana ny torohay nampitaina tamin'ny alalan'ireny tambajotra ireny, satria ireo mpampiasa azy latsaka anaty tsy refesimandidy ideolojika sy ny fitanilàna, izay vokatra naterak'izany, ka lasa ho fandisoana ny vaovao.
Ny hoe “Fotoana tsara indrindra”, ilay teny filamatra noraisin'ny filoha Sebastián Piñera nandritra ny fampielezankevitra tamin'ny fifidianana ny ho filohampirenena nanosika azy fanindroany indray ho ao amin'ny lapam-panjakàna La Moneda, dia tena mbola nofinofy sarotra tanterahana ao anatin'ny faritra lava sy tery amin'izay fantatry ny Shiliana ho toy ny firenen-dry zareo. Hatramin'ny nanombohan'i Piñera ny fepotoana fitondrany faharoa amin'ny maha-filoha azy (ny voalohany tamin'ny 2010 hatramin'ny 2014), toa somary sarotsarotra ihany ny vina ho an'ny fitondràny; misy fahatsapàna alahelo lalim-paka sy tsy fahazoana antoka raha toa ka ho azony atao ny hampitsahatra ireo endrika miiba hita misoritra momba izay fijerin'ny ampahan'ny vahoaka azy — amin'ny maha-olomalazan'ny elatra havanana shiliàna azy, mpiaradia tamin'ilay mpanao jadona Pinochet izay nihazona ny fahefana nandritra ny 17 taona.
Anatin'ireo fifampitohitohizan'ny zavamitranga, izay nanomboka niaraka tamin'ny fampielezankevitra mafonja natao hisorohana ny resaka fiakaran'ny vidin-javatra, tao anatin'ny hetsipanoherana ny sondrobidin'ny saran'ny tapakilan'ny metrô, dia lasa fantsona tena niasa be ny Twitter, WhatsApp, Instagram ary maro hafa, ho an'ireo olona mila torohay isankarazany momba ny tolotra ho an'ny daholobe. (ohatra, zotranà fiara fitaterana sy fiarandalamby ambanin'ny tany toy ny inona no mandeha, fivarotampanafody sy tsenabe aiza no mivoha, aiza no misy fivilian-dàlana, sns) sy hoe izy ireny dia niafara koa tamin'ny famoronana toepiainana mifandrirotra tanteraka mifototra aminà torohay manjavozavo tsy voamarina nataon'ireo filazambaovao ofisialy na ny zavamisy, ary tsy tondroina mazava ho anà vondrona iray na fikambanana iray manokana.
Amin'ity teboka farany ity dia tonga amin'ny farantampony ny fivoaran'ny tsara sy ny ratsy tao Sanitago-n'i Shily — renivohitra no sady ivon'ireo hetsipanoherana sy korontana — ary koa tany amin'ireo tanandehibe hafa izay nametrahana ny fepetra fanao amin'ny tany tsy milamina sy tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.
Raha ny fomba fijerin'ireo farany havanana, fampihorohoroana amin'ny endriny rehetra no mitranga ao Shily, izay baikoin'ireo olon'ny vahiny avy any ivelany, ny sasany mahita ao anatin'izany ny tànana tsy hita maso an'i Nicolás Maduro avy ao Venezoelà mandrisika ireo hetsipanoherana avy any ambadika any, miaraka amin'ny fanampian'ireo antoko politika ao an-toerana mankasitraka ny ideolojia bolivariàna ataony. Raha ny marina, misy lahatsary iray ifampitampitan'ireo Shiliàna any, ka tondroin'i i Maduro ao anatin'izany ny Vovonana tao Sao Paulo, hetsika iray tamin'ny Jolay natrehan'ny sasany tamin'ireo antoko shiliàna avy amin'ny elatra havia, ary ao anatin'izay ihany koa i Maduro no miteny fa ‘mizotra tsara araka ny tetika’ ny zavatra rehetra. Teorian'ny firaisana tsikombakomba io, izay ny OAS, fikambanan'ireo Firenena ao Amerika, no nametraka azy ho eny alohan'ny sehatra , ary voaporofo mihitsy aza fa hatramin’ i Cecilia Morel, vadin'ny filoha, dia nandefa  rakipeo iray tao amin'ny WhatsApp nanosoka hevitra ny amin'ny fisian'ny tombontsoa vahiny mikatsaka ny hanozongozona ny firenena, na hatramin'ny hoe fisian'ny fanafihan'ny avy any amin'ny tsy takamaso.
Ny lafy iray ao ambadika amin'ity raharaha ity dia ny namborahan'ireo tena farany havia ny momba ireo taona tena maizin-kitroka nandritra ny jadona miaramila sy ireo heloka nampihoron-koditra tamin'ny lasa. Ho an-dry zareo, ny fahitàna tafika fotsiny dia efa mampipongatra fahatsiarovana mahatsiravina momba ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Ny feon-kiraron'ny tafika migodogodona eny an'arabe dia fanafihana iray atao amin'ny fahamendrehana sy ny maha-olona ireo mpanao hetsipanoherana, fahatsapana famoretana velombelomin'ireo hafatra marobe alefa anaty fampahalalambaovao isankarazany manolotra fitantaràna momba ireo fanjavonana tsy hay hazavaina nanjo ny sivly, ary ireo halatra bevava notontosain'ny polisy. Goavana loatra ny tahotra ny mety ho hetsika ataon'ireo hery manokana ka dia misy ny tsaho miely mikasika ny fametrahana foibe fampijaliana ao Baquedano, iray amin'ireo toby fiantsonana lehbe ao anatin'ny rafitra ‘metro’ ao Santiago, izay vao haingana no nofoanan'ny lehiben'ny fampanoavana.
Avy amin'ny fomba fijerin'ireo ankolafy roa mifanao atsimo sy avaratra ireo, ny azy ireo ihany no marina ary fandrebirebena ny fisian'ireo porofo mifanohitra. Saingy na eo aza ireo ezaka ataon'ny andaniny sy ny ankilany mba hampisehoana fa mandinika tsara sy mandalina ry zareo, misy teboka iray tsy azo lavina iraisany: hoe io fotoana io dia mitovy sy mampahatsiahy ireo fahatsiarovan'ny andian-taona '70s ary ireo andro farany nisian'ny governemantan'i Salvador Allende, izay naongana  an-kerisetra tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny 1973.
Ny fandarohana bomba tamin'ny 11 Septambra 1973, ny La Moneda (lapan'ny filoha) tao Santiago -n'i Shily nandritra ilay fanonganam-panjakàna. Sary avy amin'ny tranonkalan'ny Tantara Politika ao amin'ny Tranombokin'ny Kaongresim-Pirenena Shiliàna, tao amin'ny Wikimedia Commons  (CC BY 3.0 cl)
Nisy ny hiakiaka sy ny fanambaràna nanohitra ireny fomba fanomezana baiko sy fiarovana nolovaina tamin'ny vanimpotoanan'ny Firaisankinan'ny Vahoaka ireny, ny fiaraha-mitantana politika notarihan'i Allende izay nitantana an'i Shily talohan'ilay fanonganam-panjakana. Nisy, ohatra, ny tsaho naparitaka tamin'ny alàlan'ireo tambajotra sosialy momba ny fisian'ny hetsika hamerenana ny fitokonana nataon'ireo mpamily fiarabe tamin'ny 1973.  Saingy tamin'izany fotoana izany, ireo mpamily fiarabe dia niantso fitokonana hanoherana ny fanararaotana tamin'ny saran'ny fandalovana eny amin'ireo lalambe migodàna mampifandray tanàndehibe samihafa. Niteraka firehetampo be ilay tsaho ka nahatery ny filohan'ny Kaonfederasiôna Nasiônalin'ireo Mpitatitra Entana, Sergio Pérez, hanao fanambaràna ho an'ny daholobe tao amin'ny Twitter mba hanazavàna ny toedraharaha hoe tsy mitombina ilay tsaho.
Iray amin'ireo zavatra azo antoka vitsivitsy tamin'ity fotoana be tabataba teo amin'ny tantaran'i Shily ity ny hoe tsy afaka manadino ny lasa isika – ary rako-javona ny ery amparan'ny làlana, zavona manafina ny làlana hizorana mankeny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/20/144345/
 tao amin'ny Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Chilean_protests#/media/File:Protestas_en_Chile_20191022_07.jpg
 iainan'i Shily: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Chilean_protests
 nametraka azy ho eny alohan'ny sehatra: https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-081/19
 ny fitokonana nataon'ireo mpamily fiarabe tamin'ny 1973.: https://www.nytimes.com/1973/08/18/archives/chile-calls-truck-strike-catastrophic-chile-says-strike-is.html